broken bone – Healthy Life Journal
All posts tagged "broken bone"
မေး ။ ခြေသန်းကျိုးသွားရင် ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး ကုဖို့ မလိုဘဲထားလို့ရသလို ကျိုးသွားတဲ့အရိုးက အလိုအလျောက်ဆက်သွားလိမ့်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။ ဟုတ်ရင် အချိန် ဘယ်လောက် စောင့်ရမလဲ။ ကျိုးသွားတဲ့ ခြေသန်းကို မကုဘဲထားရင် အရိုးပိုးဝင်တတ်ပါသလား။ ခြေသန်းကို ခွဲစိတ်ပြီး စတီး ချောင်းထည့်ကုဖို့ လိုသလား။...
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး။ ။ ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ လက်ဖျံရိုးကျိုး ခြင်းအကြောင်းကို သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ။ ။ ကလေးတွေက အရိုးကျိုးတာက အဖြစ်များပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဖြစ်များတဲ့ အရိုးကျိုးတာကို သစ်စိမ်းချိုးကျိုးခြင်း(Green- stick Fracture)လို့ ခေါ်ပါတယ်။...
အရိုးကျိုးတဲ့အခါ . . .
မေး. ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရိုးတစ်ခုခုကျိုးတဲ့အခါ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါသလဲဆရာ။ အဘွားရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်အရိုးလေးကျိုးတာ အတော်ကြာမှသိရလို့ပါ။ ဇင်မောင်၊ သာကေတ။ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အရိုးကျိုးပြီဆိုရင် အဓိက လက္ခဏာ (Cardinal Signs Of Fracture)...
အရိုးကျိုးပြီး ပြန်ဆက်တဲ့အခါ . . .
မေး. အရိုးကျိုးတာတွေကို ပြန်ဆက်ပြီးကုသပေးတာနဲ့ အရိုးကျိုးတဲ့အခါ စတီးချောင်းထည့်ပြီးကုတာတွေက အချိန်ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ စိတ်ချရပါသလဲဆရာ။ ကိုခန့်၊ လသာ။ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အရိုးဆိုတာကျိုးပြီးရင် ပုံမှန်သဘာဝအတိုင်းပြန်ဆက်သွားပါတယ်။ မဆက်တဲ့အရိုးက ရှိတော့ရှိတယ်၊ ရှားပါတယ်။ အရိုးတွေကိုခွဲစိတ်ကုသတဲ့အခါ တချို့အရိုးတွေကမခွဲဘဲနဲ့ကုလို့မရဘူး။ ပုံမှန်အနေအထား ဖြစ်အောင်...